मोरङमा दुर्घटनामा परेर तीन जनाको मृत्यु - Arunkhabar.com
प्रकाशित : १० मंसिर २०७५, सोमबार १४:१५
विराटनगर, १० मंसिर । मोरङको भिन्दा भिन्दै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा परेर गएराति र आज विहान तीन जनाको मृत्यु भएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिका ७ मा भएको दुर्घटनामा परेर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका १० का ६० वर्षीय ओमनाथ उप्रेतीको मृत्यु भएको छ ।
विराटनगरबाट पथरीशनिश्चरे स्थित घर फर्कने क्रममा उप्रेतीले चलाएको मे ९ प २७७९ नम्बरको मोटरसाइकल आइतबार साँझ आफै अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको मोरङ ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शिवकुमार पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका उप्रेतीको उपचारका क्रममा विराट नर्सिङ होममा आज विहान ५ बजे मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकलको पछाडि सवार भरतमणि आचार्य घाइते हुनु भएको छ ।
उप्रेती भूमिहीन सुकुम्बासी जिल्ला कार्य समिति मोरङका संयोजक र पथरीशनिश्चरे स्थित नवदुर्गा सामुदायिक मन्दिरको अध्यक्ष समेत हुनु हुन्थ्यो । दुबै जना मन्दिरको काम लिएर विराटनगर आएको र घर फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ । त्यस्तै बेलबारी नगरपालिका १० भाउन्नेमा भएको दुर्घटनामा परेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको को १ ख ४०१४ नम्बरको यात्रुबहाक बसले विपरित दिशाबाट जाँदै गरेको को २१ प ७९५ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा भएको दुर्घटनामा परेर मोटरसाइकल चालक उर्लाबारी नगरपालिका ४ का २५ वर्षीय सुजन मादेन र पछाडि सवार मिक्लाजुङ गाउँपालिका ५ की २८ वर्षीय गोपीदेवी राईको गय राति १० बजे मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक शिवकुमार पोखरेलले बताउनु भयो । हिजो दिउँसो ३ बजे दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते मध्ये मादेनको विराटनगर स्थित नोवेल मेडिकल कलेज र राईको विराट नर्सिङ होममा मृत्यु भएको पोखरेलले जानकारी दिनु भयो ।
बसको ठक्करबाट अनियन्त्रित बनेको मोटरसाइकलले अगाडि रहेको अर्को मे ६ प ४९७५ नम्बरको मोटरसाइकललाई समेत ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटनामा मे ६ प ४९७५ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक पथरीशनिश्चरे नगरपालिका १ का ४० वर्षीय डिल्लीराम गौतम घाइते भएको प्रहरीे जनाएको छ ।
उहाँको नोवेलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेकपा नेताले गरे महिलाको हत्या
विराटनगर, १२ पुस । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि छैठौं राष्ट्रिय युवा सम्मेलन आजबाट विराटनगरमा शुरु भएको...
Brand Viagra without prescription, purchase zithromax. विराटनगर, २५ मंसिर । मोरङमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको...